फिफा वरियतामा नेपालको स्थान यथावत, कति औँ स्थानमा छ ?
Home खेलकुद फिफा वरियतामा नेपालको स्थान यथावत, कति औँ स्थानमा छ ?
काठमाडौँ – नेपालको फुटबल बरियता यथावत रहेको छ । विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) ले आज सार्वजनिक गरेको वरियताअनुसार नेपाल १७१औँ स्थानमा यथावत रहेको छ ।
नेपालले एक महिनायता कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता खेलेको छैन । बङ्गलादेशबाहेक अन्य दक्षिण एसियाका सबै देशको बरियता यथावत रहेको छ । बङ्गलादेश फिफा बरियतामा दुई स्थान झरेको छ ।
गत साता बङ्गलादेश विश्वकप छनोटअन्तर्गत कतारसित पराजित भएको थियो । दक्षिण एसियाली देशमध्ये भारत १०४औं स्थानमा, माल्दिभ्स १५५, बङ्गलादेश १८६, भुटान १८९, पाकिस्तान २०० तथा श्रीलङ्का २०६औँ स्थानमा रहेको छ ।
फुटबलको विश्व बरियतामा बेल्जियम शीर्ष स्थानमा यथावत छ । फिफा बरियतामा फ्रान्स दोस्रो, ब्राजिल तेस्रो, इङ्ल्याण्ड चौथो, पोर्चुगल पाँचौ, स्पेन छैटौं, अर्जेन्टिना सातौँ, उरुग्वे आठौँ, मेक्सिको नवौँ तथा इटाली १०औँ स्थानमा रहेको छ । रासस
प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदै
खबर वाइड संवाददाता - २०७७, २६ मंसिर शुक्रबार ०८:०६ 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि सुरु हुँदैछ । दाङको देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिताको सबै तयारी पूरा भएको लुम्बिनी...
मेस्सीले पेलेको कीर्तिमान भंग गरेको खेलमा बार्सिलोना विजयी
मेस्सीले एउटै क्लबबाट सबैभन्दा बढी गोल गर्ने ब्राजिलियन फुटबलर पेलेको कीर्तिमान भंग गरेको खेलमा बार्सिलोनाले रियल भाल्लाडोलिडलाई ३-० गोलले पराजित गरेको छ। मेस्सीले खेलको ६५औँ...
त्रिभुवन आर्मी बन्यो एएफसी क्लब लाइसेन्स पाउने पहिलो नेपाली क्लब
७ पुस, काठमाडौं । त्रिभुवन आर्मी क्लबले एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)बाट क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । एएफसी क्लब लाइसेन्सिङ रेगुलेसन २०२० अनुसार आवश्यक मापदण्ड...
अर्थतन्त्र खबर वाइड संवाददाता - २०७७, २६ मंसिर शुक्रबार ०८:०६ 0
अर्थ खबर वाइड संवाददाता - २०७७, २६ मंसिर शुक्रबार ०८:०६ 0
समाचार खबर वाइड संवाददाता - २०७७, २६ मंसिर शुक्रबार ०८:०६ 0